QISA BAASABOORKA SOOMAALIYA QURUX BADANAA OO QEYMO DARANAA! W/Q: Keinaan | Gaaloos.com
Home » Layaab » QISA BAASABOORKA SOOMAALIYA QURUX BADANAA OO QEYMO DARANAA! W/Q: Keinaan
QISA BAASABOORKA SOOMAALIYA QURUX BADANAA OO QEYMO DARANAA! W/Q: Keinaan
Nairobi-Waxaan Muqdisho kasoo duulnay abaarihii 11:40. Innagoo soo marnay intaayadii musaafurka ahayd 3 jekin oo aiporka Muqdisho ah. Dhabtii waligey intaan adduunka dacaladiisa u kala gooshayey ma aanan arag jekin ka adkaa kan Muqdisho.
Intaas kadib diyaaradii ayaa kacday innagoo ku degnay magaalo Wajeer la yiraahdo oo Kenya guheeda ah. Kadib rakaabkii iyo alaabtaan wadanay oo dhan dhulka ayaa lasoo dhigay, innagoo mar kale marnay jekin kale. Dhabtii aad ayaan arinkaas uga carooday waayo 3 jeer ayaa nalagu soo baaray Muqdisho, sababta mar 4 aad garoon ciidan inta naloogu dajiyey oo kuleyl baddan oo aad moodo qoraxda in madaxaaga loo soo dhaweeyey naloo baarayo waan fahmi waayey.
Kadib waxay indhaheygu qabteen 3 masuuliyiinta Soomaaliya ka mid ah oo aan filaayo iney ahaayeen wasiir iyo xildhibaano oo iyagana sida shacabkoo kale meel qorax ah taagan oo la baarayo.
Sidoo kale waxay indhaheygu qabteen madaxweynihii hore ee Galmudug State Mr Caalim oo qoraxda kuleylkeeda intuu u adkeysan waayey fadhiya dhulka.
Waxaan soo galnay qol ay ku sheegeen imagareeshin inuu yahay oo 2-da dhinac ay kala fadhiyaan shaqaalo Kenyan ah.
Saf dheer ayaan galnay innagoo tuseyna baasabooradeena shaqaalaha fadhiya horteena.
Kadib nin Kenyan ah ayaa intuu nasoo dhax maray isagoo ku qeylinaya dadka wata Baasaboorka Itoobiya dhinaca midig ha mareen, meesha ay marayaan dadka wata baasaboorka Kenya.
Wuxuu kaloo lahaa dadka deganaanshaha Kenya wato ha mareen sidoo kale dhanka midig.
Annigoo ninkaas la yaaban, ayaan waxaan is weydiiyey horta Soomaaliya soow ka mid maaha dalalka Bariga Africa iyo Igad?
Waxaa kaloon is weydiiyey maxay tahay sababta Itoobiyaanka baasaboorkooda loo ciseynayo, halka baasaboorka Soomaaliya oo qurux baddan aan la xushmeyneyn, iyo Kenyanka markey Muqdisho yimaadaan toos uga qaata fiisaha welibo iyagoo 2 -da gacmood lagu soo dhaweynayo ayey dalkeena shaqo u yimaadaan.
Diyaaradda aan saarnaana waxaa aad uga buuxay Kenyan dalkeena shaqo usoo raadsadsaday.!
Inteenii kale ee baasabooradda reer Galbeedka wadatay wax dhiba lama kulmin oo waa naloo fududeeyey Fiisaha dal ku galka, lkn waxaan la yaabay kuwii baasaboorkeena quruxda baddan watay iyo masuuliyiin isku sheegii in loo daba mariyey dadka.!
Anoo careysan ayaan dadkii safka iskula jirnay ku iri ma raali baan ka wada nahay in sidaan naloo bah dilo?
Qofkasto isagoo murug ka muuqato ayuu iigu jawaabayey innagaa sidaan isyeelnay!!!
Intaas ugama harine masuuliyiin isku sheegii Soomaaliya nagala yimid oo meel qorax taagan iyagoo taay iyo suudad ku xarakoonaya boorso samsamnayd ahna wato ayaan iri bal fiiriya qeymo daradda la idinku sameeyey idinkoo masuuliyiin isku sheegaya, xitaa ma la idiin quuri waayey in qol V.I. P ah haduu leeyahay airporkan ciidan la idin fariisiyo. Nina iima jawaabin anne waxaan iri waa igu dan naag dabo yar oo uur leh!
Qofkii wadaninimo ka buuxda dhabtii dhiig kar ayaa ku dhacaya markuu arko sida Soomaali loo bahdilayo, ee ilaahow Soomaaliya u gar gaar oo kuwaan masuumiyiinta sheeganaya bar sidii dowladaha deriska ah loola xisaabtami lahaa aamiin.
Insha Allaah maalin uun waan ka bixi doonaa bahdilaadda, dalkeenana waan ka tarxiili doonaa kuwa baddan oo dalalka deriska ah.
Maxamed A keinan
Title: QISA BAASABOORKA SOOMAALIYA QURUX BADANAA OO QEYMO DARANAA! W/Q: Keinaan